မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သမီး သတိလစ်လောက်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ စုံတွဲရဲ့ ဖြစ်ရပ် – Myanmar Update News
မင်္ဂလာဦးည ရင်ခုန်သံ အားးးးးးး” အော်သံကြားပေမယ့်ဒါသဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် …။မင်္ဂလာဦးညပေးကိုး
အော်သံကြားပြီး သိပ်မကြာလိုက်. . .လူပျိုကြီး Moe Aung အသံနက်ကြီးဖြင့် ” အမေနဲ့အဖေတို့ရေလာကြပါဦး ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး “ဟာဒုက္ခတော့များပြီနဲ့တူတယ် ယောက်ျားရေတော့ သားကို သွားကြည့်ဦး”သိပ်မကြာလိုက် အဖေဖြစ်သူမှ ထပ်အော်ပြန်သည် …။
“မင့်းချွေးမသတိမလည်တော့ဘူးဟ ဆရာဝန် အမြန်ခေါ် ” ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိ ”ကိုယ်လဲတက်မကြည့်ရဲ သွေးသန်ရဲရဲတွေ မမြင်ရဲဘူး အိမ်ထဲက ရုပ်ရုပ်သည်းသည်း အသံတွေကြောင့် ဘေးအိမ်ကလူများ ပါရောက်လာကြသည် …။
သိပ်မကြာလိုက်။“လမ်းဖယ်လမ်းဖယ် ဆရာလာပြီ”အဖေကြီးက “မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ဆရာ့ကိုပြောပြလိုက်”ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆရာရဲ့”ကန်တော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလဲ ညအိပ်ဖို့ ပုဆိုးလဲနေတုန်း သူကထအော်ပြီး သတိလစ်သွားတာပဲ”
နှလုံးတော့ ခုန်သေးတယ် အသက်ရှိသေးတယ် သွေးအားနည်းနေတော့ ဆေးချိတ်ပေးခဲ့လိုက်မယ် ”“ကာင်းသလိုသာလုပ်ပါဆရာ”“ နိုးလာမှဘာဖြစ်လဲ မေးကြည့်ပေါ့ ”အမေက…..
“နင်အတော်မွှေတဲ့ကောင်” ဆိုပြီးရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် ထွက်သွား၏ မိုးစင်စင်လင်းသွားမှ ငတိမကနိုးလာပြီး ပြူးတုပြူးပြဲဖြင့် အိပ်ယာခြင်ထောင်တွေ လိုက်လှန်လှောရှာလေ၏ … ။
သူ့ဘေးနားကလူတွေကို ဂရုမစိုက်အားသေး …။အမေက …. “သမီးဘာရှာနေလဲ” မေးလိုက်တော့မှ …“ မျော့”“ဘယ်ကမျော့လဲ”“ညကလေ ကို Moe Aung ပုဆိုးလဲနေတုန်းက သူ့ပေါင်ကြားမှာ မျော့ကြီးကပ်နေတာ လက်သန်းလုံးလောက်ရှိတယ် …။
သမီးက မျော့ဆိုအရမ်းကြောက်လို့…အိပ်ယာထဲရှိ သေးလားလိုက်ရှာနေတာ ”တိန်..။ထိုအချိန်မှ ကို Moe Aungမှာ ငမျှော့ ဟုအမည်တွင် သွားလေတော့သတည်း။
အပျင်းပြေ ဟာသအမြင်လေးနဲ့ဖတ်ပီး သဘောကျပါက ရှယ်သွားလိုက်ပါ။အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆု‌တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့်။
မင်ျဂလာဦးညမှာ သတို့သမီး သတိလဈလောကျအောငျ ဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့ စုံတှဲရဲ့ ဖွဈရပျ
မင်ျဂလာဦးည ရငျခုနျသံ အားးးးးးး” အျောသံကွားပမေယျ့ဒါသဘာဝပဲလဆေိုပွီး အိမျသားမြား မသိခငျြယောငျ ဆောငျနလေိုကျသညျ …။မင်ျဂလာဦးညပေးကိုး
အျောသံကွားပွီး သိပျမကွာလိုကျ. . .လူပြိုကွီး Moe Aung အသံနကျကွီးဖွငျ့ ” အမနေဲ့အဖတေို့ရလောကွပါဦး ဘာဖွဈသှားလဲမသိဘူး “ဟာဒုက်ခတော့မြားပွီနဲ့တူတယျ ယောကျြားရတေော့ သားကို သှားကွညျ့ဦး”သိပျမကွာလိုကျ အဖဖွေဈသူမှ ထပျအျောပွနျသညျ …။
“မငျ့းခြှေးမသတိမလညျတော့ဘူးဟ ဆရာဝနျ အမွနျချေါ ” ဘာတှဖွေဈကုနျလဲမသိ ”ကိုယျလဲတကျမကွညျ့ရဲ သှေးသနျရဲရဲတှေ မမွငျရဲဘူး အိမျထဲက ရုပျရုပျသညျးသညျး အသံတှကွေောငျ့ ဘေးအိမျကလူမြား ပါရောကျလာကွသညျ …။
သိပျမကွာလိုကျ။“လမျးဖယျလမျးဖယျ ဆရာလာပွီ”အဖကွေီးက “မငျးဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲ ဆရာ့ကိုပွောပွလိုကျ”ကြှနျတျောဘာမှမလုပျရသေးဘူးဆရာရဲ့”ကနျတော့ပါရဲ့ကြှနျတျောကလဲ ညအိပျဖို့ ပုဆိုးလဲနတေုနျး သူကထအျောပွီး သတိလဈသှားတာပဲ”
နှလုံးတော့ ခုနျသေးတယျ အသကျရှိသေးတယျ သှေးအားနညျးနတေော့ ဆေးခြိတျပေးခဲ့လိုကျမယျ ”“ကာငျးသလိုသာလုပျပါဆရာ”“ နိုးလာမှဘာဖွဈလဲ မေးကွညျ့ပေါ့ ”အမကေ…..
“နငျအတျောမှတေဲ့ကောငျ” ဆိုပွီးရှကျကိုးရှကျကနျးနှငျ့ ထှကျသှား၏ မိုးစငျစငျလငျးသှားမှ ငတိမကနိုးလာပွီး ပွူးတုပွူးပွဲဖွငျ့ အိပျယာခွငျထောငျတှေ လိုကျလှနျလှောရှာလေ၏ … ။
သူ့ဘေးနားကလူတှကေို ဂရုမစိုကျအားသေး …။အမကေ …. “သမီးဘာရှာနလေဲ” မေးလိုကျတော့မှ …“ မြော့”“ဘယျကမြော့လဲ”“ညကလေ ကို Moe Aung ပုဆိုးလဲနတေုနျးက သူ့ပေါငျကွားမှာ မြော့ကွီးကပျနတော လကျသနျးလုံးလောကျရှိတယျ …။
သမီးက မြော့ဆိုအရမျးကွောကျလို့…အိပျယာထဲရှိ သေးလားလိုကျရှာနတော ”တိနျ..။ထိုအခြိနျမှ ကို Moe Aungမှာ ငမြှော့ ဟုအမညျတှငျ သှားလတေော့သတညျး။
အပငျြးပွေ ဟာသအမွငျလေးနဲ့ဖတျပီး သဘောကပြါက ရှယျသှားလိုကျပါ။အခုလိုအခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသော နလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆု‌တောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့။